De Heus Myanmar Ltd offering best animal feeds in Myanmar - De Heus
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိလိုသော မြန်မာ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
De Heus Myanmar: Offering best broiler feeds, layer feeds, swine feeds, duck feeds, quails feeds and cow feeds in Myanmar Livestock Sector. We also provide specialized animal feeds to meet the needs of each Myanmar livestock farmer.
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိလိုသောမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ကြွယ်ဝသည့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေပါပြီ။
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးမြင့်အစာများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ပေးနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးသောတိရစ္ဆာန်အစာများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိနေပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့်မွေးမြူရေးအစာများ၊ ကြွယ်ဝသည့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Find the right feed!
De Heus အနေဖြင့်မြောက်များစွာသောမွေးမြူရေးအစာများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလို အကောင်းမွန်ဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်စေပါသည်။